အမ်းတယ်…လှူတယ် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » အမ်းတယ်…လှူတယ်
Posted by panpan on Jun 7, 2012 in Creative Writing, Environment | 26 comments
တစ်နေ့ညနေ ကြည့်ပေါက်တို့ အိမ်ရှေ့မှာထိုင်နေတုန်း ရပ်ကွက်ထဲက ဆွမ်းလှူအသင်းအဖွဲ့တွေ လာအလှူခံတယ်။ ခုနောက်ပိုင်း အလှူခံထွက်ရာမှာ ယောက်ျားလေးတွေချည်း ထွက်ကြတာများတယ်။ သီချင်းတွေဖွင့်၊ မိုက်နဲ့အော်တွေ မလုပ်တော့ဘူး။ ငွေလည်းကုန်၊ ကရိကထလည်းများတယ်။ ဆိုတော့ လူငယ်ဆွမ်းလောင်းအသင်းဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့ လူငယ်လေးတွေပဲလုပ်လာကြတယ်။ ကောင်းပါတယ်။ “အလှူခံပါတယ်ခင်ဗျာ။ ကျွန်တော်များ —-လူငယ်ဆွမ်းလောင်းအသင်းမှ မြတ်စွာဘုရားအမှူးရှိသော သဗ္ဘုတိသံဃာတော်အသျှင်သူမြတ်များအား အရုဏ်ဆွမ်းလောင်းလှူမည်ဖြစ်ပါသဖြင့် မိမိတို့သဒ္ဓါတရားရှိသရွေ့ နည်းများမဆို ကုသိုလ်ပါဝင်တော်မူကြပါခင်ဗျား။ ဤသို့လောင်းလှူရသောအကျိုးအားကြောင့် သဒ္ဓါ၊ သီလ၊ သုတ၊ စာဂ၊ ပညာ၊ ဟီရိ၊ သြတ္တပ အစရှိသော သူတော်ကောင်းတရား၇ပါးနှင့်ပြည့်စုံကြပြီးလျှင် ရွှေပြည်နိဗ္ဗာန်သို့ တက်လှမ်းတော်မူနိုင်ကြပါစေခင်ဗျား။ အလှူခံပါတယ်ခင်ဗျာ။” ဆိုပြီးသံပြိုင်အော်ကြတယ်။ ဒီလိုအလှူခံရင်း အိမ်တစ်အိမ်ကကောင်မလေးတစ်ယောက်ထွက်လှူတယ်။ ကြည့်ပေါက်လည်း စပ်စပ်စုစုလှမ်းကြည့်လိုက်တယ်။ သူကငွေလှူတာကို လက်ထဲကငွေကို အရင်မလှူသေးဘူး။ ကိုင်ထားတုန်း။ အလှူခံဖလားထဲကြည့်တယ်။ ပြီးတော့ ဇွက်ဆိုဖလားထဲလက်နှိုက်မွှေတယ်။အကြွေရှာတာနေမှာပေ့ါ။ ငွေလှူရင်းအကြွေလဲတာ။ အဲဒီဖလားကိုင်ထားတဲ့ကောင်လေးမှာ လိုအပ်သလောက်ငွေအကြွေမပါဘူးထင်တယ်၊ နောက်တစ်ယောက်ကိုလှမ်းခေါ်တယ်။ အဲဒီမှာ အပေးအယူ၊ အအမ်းအနှုတ်နဲ့ အလှူဖြစ်၊ အလုပ်ဖြစ်သွားကြတာ။ ဒါလေးတွေမဆိုးပါဘူး။ သူရောကိုယ်ရော အဆင်ပြေကြပါတယ်။ မပြေတာလည်းရှိသေးတယ်။ ကြည့်ပေါက်ဈေးဝယ်သွားတယ်။ ဈေးထဲမှာ ကုန်စိမ်းဆိုင်ရှေ့ကုန်စိမ်းဝယ်နေပြီးလှည့်အထွက် လေးငါးဆယ်နှစ်အရွယ် ဆရာလေးသီလရှင်လေးတွေ လာအလှူခံတယ်။ အဲဒီမှာ ကုန်စိမ်းသည်က “ဆရာလေးတို့ အမ်းစရာအကြွေပါသလား။ ရှိရင် ဒီမှာ —-တန်ကို —-အမ်းနိုင်မလား။ အမ်းနိုင်ရင်လှူမယ်၊ မအမ်းနိုင်ရင် မလှူတော့ဘူး” တဲ့။ ကြည့်ပေါက်လည်း “ဟ၊ အဆန်းပါလား” ဆိုပြီး အံ့သြတာပေါ့။ သူလည်းလှူဖြစ်လား၊ ဆရာလေးတွေရော အကြွေအလုံလောက်ပါလား မသိလိုက်ခဲ့ပါဘူး။ အချိန်မရှိတာနဲ့ ကိုယ့်ဘာသာလှည့်ပြန်ခဲ့ရပြီး အဲဒီမြင်ကွင်း ကြည့်ပေါက်ရှေ့က ပျောက်သွားတယ်ဆိုပါတော့။
ပြောရရင် အဲ့လိုကိစ္စကလည်း စဉ်းစားရကြပ်ပ..
လှူချင်တာ ကငါးဆယ်ဆိုရင်.တရာ့ငါးဆယ် ပြန်အမ်းပါလို့ပြောရလဲ အခက်..
သူတို့အများစုကလည်း ပြန်အမ်းချင်ပုံမရ ..
စိတ်ထဲက လှူချင်တာကလည်း ၅၀လောက် နောက်ဆုံးတော့..
လှူလိုက်ပေမဲ့ စိတ်ကမပြတ်..၂၀၀ တောင်ပါသွားသကိုး..
လှူပြီး ပြန်စဉ်းစားလိုက်တော့ အစောထဲက ပိုက်ဆံမထုတ်လိုက်မိဘဲ.
မသိသလိုနေလိုက်ရင် အကောင်းသားဆိုတဲ့ အတွေးက ပေါ်လာပြန်ရော..
ဘယ်လို တောင်းတောင်း မပေးတော့ဘူး..
ကျန်ခဲ့တဲ့ .၁၀ နှစ်လောက်ကပါ နော့
အမျှင်မပြတ်ဘဲ ခုငါးနှစ်လောက်ကြာတာတောင် တွေးမိနေတုန်း
သူတို့ဂလို ၀ိုင်းသမ မယ်မှန်းသိရင်..
နောက်ထပ် ကွန်မန့်ပေးပြီး တစ်ဆယ်ထပ်မယူခဲ့ပါဘူး..
ခေါင်းရမ်းပြပြီး မလှူသေးပါဘူးလို့ ပြောခဲ့တာ အခုအချိန်အထိပဲ မလား …
အော် … နှစ်ရာကို စိတ်မပြတ်ပုံများ …
ပန်ပန်ရေ … အလှူခံဆီက ပိုက်ဆံကို ပြန်အမ်းပြီးလှူတာမျိုးတွေတော့ တွေ့ဖူးပါတယ် … ဒါပေမယ့် .. ကိုယ့်စိတ်ကိုယ်က .. တမျိုးကြီး ခံစားရလို့ .. လှူရင် အပြတ်လှူပါတယ် .. အမ်းမယူပါဘူး .. မလှူလျှင်လည်း … လုံးဝကို မလှူဘူး ….. ။
ငွေအကြွေရှားပါးနေတဲ့ ဒီအချိန်မှာ အနုတ်လှူချင်တဲ့လူတွေကြားထဲ ဒီနည်းလေး အတော်တော့ အသုံးတည့်သား …. ။
ပန်ပန်ရေ …….. ပျောက်နေတာကြာပလားလို့ အမထင်တယ် ……… ပန်ပန်ပို့စ်လေးတွေမျှော်နေတာ .. အားပေးချင်လို့ …….
အမကတော့ သီလရှင်တန်းတွေကြွရင် ၁၀၀၀ နဲ့ ၅၀၀ အမြဲလှူမိတယ် ……. ကိုယ်လှူမိတဲ့အလှူတောင် နည်းသွားသလား စိတ်ထဲထင်မိတယ် ……. တစ်ချို့ဈေးသည်တွေဆို သီလရှင်လေးတွေကို တစ်ပါး ၂၀ တောင်လှူတဲ့လူတွေရှိသေးတယ် သူတို့ဘက်ကကြည့်တော့လည်းမှန်သလားလို့ သူတို့ကဈေးသည်ဆိုတော့ အလှူခံတွေ အများကြီးလှူရတယ်လေ တစ်ယောက် ၂၀ ဆို ၁၀ယောက်ဆို ၂၀၀ ထားပါလေ သူ့စေတနာ သူ့အကျိုးပေးပေ့ါ ……….
ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကတောင် ပန်ပန်တို့ဆီလာသေးတယ် အမတောင်အပေါ်ထပ်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်သေးတယ် သိလား ………
ပြီးခဲတဲ့တစ်ပတ် စနေ၊ တနင်္ဂနွေက အလုပ်သွားရတယ်
ဘယ်လောက်ပဲလှူလှူ၊ လှူလိုက်တဲ့ပေါ်မှာ အစွဲကင်းရင်၊ ကုသိုလ်ရတယ်လုိ့ ဘုန်းကြီးတွေ ဟောတဲ့ တရားတော်တွေမှာ နာယူမှတ်သားမိပါ၏။
အကြွေရှိမှ ဆွမ်းခံပါ ဆိုသလို ဖြစ်နေပြီပေါ့လား ။
အလှူခံများတဲ.နေရာတွေမှာ ဘယ်လောက်ပြန်အမ်းပါဆိုပြီး လှူတာစတွေ.ဖူးတုန်းကတော. အမြင်ဆန်းပြိးအားနာသလိုမျိုး ဖြစ်မိပေမယ်. အခုတော. တွေ.ပါများတော.ရိုးသွားပြီ။
အန်တီကတော့ အလုပ်ထဲမှာ ဘီစကစ်ထုပ်လေးတွေ၊ဇီးတော်ဖီ၊သကြားလုံး၊ကြာဖံထုပ်၊ဆပ်ပြာ ဆောင်ထားတယ်။
အနည်းအများတော့ ချိန်ပြီး လှူလိုက်တာပေါ့။
ခြေကောင်းလက်ကောင်း အရွယ်ကောင်းတွေဆို ပေးကိုမပေးဘူး။
ကလေးလေးတွေဆိုရင်လည်း ပိုက်ဆံဘယ်တော့မှ မပေးဘူး။
ဒါပေမယ့် အမ်းစ၇ာ၇ှိလားဟင် …….
အဲ့လိုတော့ တခါမှ မအမ်းခိုင်းဖူးဘူး။ တမျိုးပဲ။ ဒီလိုပဲ အဆင်ပြေသလို လှူလိုက်မိတာ များတယ်။ အဖိတ်နေ့ဆို ဆန်လှူတယ် အိမ်မှာ။
အမ်းတာနဲ့လှုတာက ယဉ်ကျေးမှု့တခုလိုတောင်ဖြစ်နေပါပြီ။ သီလရှင်လေးတပါးကို ၅၀၀ တန်လေးထိုးပေး လိုက်။ ပြီးရင် တပါး ၅၀ ပါဘုရားလို့ပြောလိုက်ရုံပဲ။ အဲသီလရှင်က ဆရာလေးတို့ ၅ ပါးပါဆို ပြီး ၂၅၀ ပြန် အမ်း သွားပါလိမ့်မယ်။ ဆန်ဇလုံလေးအိမ်ရှေ့ချထား ဇွန်းလေးတပ်စာလေးရေး တပါးတဇွန်းပါဘုရားဆို ရင် တော့ ဇလုံလိုက်လောင်းထည့်သွားပါလိမ့်မယ်။
လှူချင်စိတ်ရှိလို့မှတော့ အပြတ်လှူလိုက်တော့မယ်၊ မဟုတ်ရင်လဲ အကြွေဆောင်ထားမယ်။ ပြန်အမ်းခိုင်းနေရတာတော့ မဟုတ်သေးဘူး။ ရွှေတိဂုံဘုရားလိုနေရမျိုးဆို အလှူခံပုံးထဲက ပြန်နှိုက်လို့လဲမရနဲ့ ဘယ်လိုလုပ်ကျမယ်မသိ
အမ်းတယ် ..လှူတယ် .. ဒါကလည်းပြောရတော့ခက်သားး
သာသနာရေးအတွက်အလှူခံလာတဲ့ ကလေးတွေ ဆီမှာ အကြွေလဲပီး အလှူထည့်တာနဲ့ ….
သီလရှင်ကို အပါးရေများလို့ ထည့်ရတာများလို့ အကြွေ အမ်းခိုင်းပီးထည့်တာ နဲနဲတော့သဘာဝကျတယ်ဆိုပေမယ့် ..
ရဟန် တော် တွေကို အပါးရေများလို့ အကြွှေအမ်းခိုင်း ပီး လှူမယ်ဆို ရင် သဘာဝကျပါ့မလားးး..
ဒါက ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ ဆိုင်သွားပီ ….အသိစိတ်နဲ့ ဆိုင်သွားပီလို့ထင်ပါတယ် …
ဘာသာသာသနာပေါ်မှာ ကိုးကွယ်ယုံကြည့်မှုနဲ့ ဆိုင်မယ်လို့လည်းထင်မိပါတယ် …
အကြွေမရှိလို့ မလှူဘူးဆိုတာထက် စာရင်
ပြန်အမ်းခိုင်းပြီး လှူတာက နဲနဲ ပိုကောင်းမလား မသိဘူး …
ငါးဆယ် ၊ တရာ ဆိုတာတွေ ပါနေလို့ မရှင်းမလင်း ဖြစ်နေတာဗျ …
ဥပမာ ငါးထောင်တန် ပါသွားတယ် .. နှစ်ထောင်လှူချင်တယ် … သုံးထောင်ပြန်အမ်းပါ ..
ဒါမျိုးဆိုတာ လူတိုင်း လုပ်ဖူးကြတာပဲ ..။
ဒီတော့ လှူချင်သလောက်ကိုပဲ ပြန်အမ်းခိုင်းပြီး လှူတာက မလှူတာထက်တော့ ပိုကောင်းတယ် .
အကြွေဖျက်ချင်လို့ တစ်ထောင်တန်ပေးပြီး ကိုးရာ့ငါးဆယ် ပြန်အမ်းပါ ဘုရားဆိုတာမျိုးကတော့ …
များကတော့ ဘယ်သူအလှူခံခံ ခေါင်းပဲ ခါခါပြနေတာ များလို့ 
ပန်ကာ ခေါင်း ဖြစ်နေပါပကောဗျာ..
ကျွန်တော်တို.တော့ လှူတော့မယ်လို. စဉ်စားထားရင် အိတ်ထဲနှိုက်လိုက်တာနဲ. ပါလာတဲ့ပိုက်ဆံလှူလိုက်တာပဲ………
ကိုယ်အိတ်ထဲလဲ ယုံကြည်တယ်လေ… ငါးထောင်တန် မပါဘူးဆိုတာ… ဟီးဟီးဟီး………
နောက်ဆိုတစ်သောင်းတန်တွေကြားက တစ်ဆယ်တန်လေးထုတ်ပြီး လှူတော့မှာပေ့ါနော
အမ်းတယ်။ လှူတယ်။ မှန်ပါတယ်။
လှူချင်တယ်။ အကြွေမရှိဘူး။ မလှူဘူး။
လှူချင်တယ်။ အကြွေမရှိဘူး။ အမ်းတယ်- လှူတယ်။
အလုပ်ဖြစ်ဖို့ အဓိကပဲ မဟုတ်လား။
အင်း ဟုတ်တယ် ပန်ပန်ရေ… မလှူခင် အလှူခံဆီက အကြွေတောင်းတာ ရှိသေးတယ်။ ခုနိုင်သလောက် လှူပေါ့ မဟုတ်ဘူး။ တစ်ခါတလေ ဆရာလေးတွေဆီက အကြွေလဲတာတွေလည်း ရှိသေးတယ်။ တစ်သောင်းတန် ထွက်လာရင်တော့ ဘယ်သူမှတောင် လှူမှာမဟုတ်သလိုပဲနော် စဉ်းစားမိတာလေးပါ။ ခု ငါးထောင်တန်တောင် ကားသမားကအစ အင်တင်တင်လေ…
ဒါလဲ သူ့ဟာသူတော့ ဟုတ်နေတာပါပဲ။ အဖိတ်နေ့ သီလရှင်တွေကြွရင် 6ပါး 7ပါးလောက်… ကိုယ့်မှာအကြွေမရှိတော့ ဆရာလေးတွေအားလုံးအတွက်လို့ပြောပြီး 500 တန်တရွက်ကို တပါးပါးဆီထည့်ပြီး အမြဲ လှုပါတယ်။ 50 တန်/20 တန်လေးတွေရှိရင်တော့ တစ်ပါးဆီထည့်တာပေါ့နော်။ အဲလိုတစ်ပါးဆီလောင်း
ရတာပိုနှစ်သက်သလိုပဲ။ ဘယ်လိုပဲလှုလှု စိတ်ထဲမှာတော့ ပြတ်ပါတယ်။
စနိုးကြုံဖူးတယ် မမပန်ပန်ပြောသလို မျိုးဈေးသည်ကြုံဖူးတယ် ဆရာလေးတွေကလည်းအမ်းပေးတယ် ဒါပေမယ့် အကြွေအမ်းပေးတယ် လှူတာတော့၅၀ကနေမပိုပါဘူး ဆရာလေးတွေဆီက အကြွေ အမ်းလိုက်တာ သူရောင်းဝယ်ရေးတွက်တေ့ာကောင်းတာပေါ့ အကြွေရသွားလို့လေ။